ktmkhabar.com - इन्डक्सन किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यसरी थाहा पाउनुहोस् राम्रो क्वालिटीको इन्डक्सन चुल्हो
इन्डक्सन किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यसरी थाहा पाउनुहोस् राम्रो क्वालिटीको इन्डक्सन चुल्हो
यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता इन्डक्सन चुल्होतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना देखिन्छ ।
इन्डक्सन चुल्होले चुम्बकीय प्रतिक्रियाद्वारा भाँडोलाई तताउने काम गर्छ । यसको ताप सिधै भाँडामा पर्ने हुनाले भाँडो एकदमै छिटो तात्छ । ताप पनि सबैतिर समानरुपमा जाने भएकाले ग्यासको तुलनामा इन्डक्सन चुल्होमा चाँडो खाना पाक्नुका साथै राम्रो तरिकाले पनि पाक्छ ।
यसरी थाहा पाउनुहोस् राम्रो क्वालिटीको इन्डक्सन चुल्हो
इन्डक्सन खरिद गरेको केही समयभित्र बिग्रियो भने त्यसको कुनै अर्थ भएन त्यसकारण इन्डक्सनको भित्रपट्टी रहेको क्वाइल वा अन्य उपकरणमा पानी नपस्ने खालको सुरक्षा उपकरण भएकाको खरिदमा ध्यान दिन जरुरी छ ।